को-रोना तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेला सबैले जान्नुपर्ने कुरा, कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने त ! – Annapurna Daily
On May 18, 2021 108
काठमाडौँ । को- रोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा अस्पतालहरू भरिएको र शय्या पाउन गाह्रो भएको गुनासाहरू आइरहेका छन्। कतिपय को- भिडका बिरामीहरू घरमै बसिरहेका छन् । उसोभए कस्तो अवस्था आए अस्पताल जाने त ? डा. पुनका अनुसार पल्स अक्सिमिटर उपकरणको सहयोगमा घरमै शरीरमा अक्सिजनको तह कति छ भन्ने कुरा बिरामीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ।
काेराे-ना भा- ईरस ( काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ अनिबार्य रुप मा माक्स को प्रयोग गरौं साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश । एजेन्सीको सहयोगमा